‘इन्टरनेट लतले मानसिक समस्या बढायो’ « Clickmandu
‘इन्टरनेट लतले मानसिक समस्या बढायो’
प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७३, मंगलवार १९:१३
नियमित कामलाई नै असर पर्ने गरी इन्टरनेटको लतमा पर्नुभएको छ भने ख्याल गर्नुहोस् इन्टरनेट लतले जटिल मानसिक समस्यातिर धकेल्न सक्छ । क्यानेडामा हालै भएको एक अनुसन्धानले किशोरकिशोरीमा इन्टरनेट लतले विभिन्न मानसिक समस्या बढाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरू माझ अन्टारियोस्थीत म्याक मास्टर युनिभर्सिटीले गरेको सोसल मिडिया र इन्टरनेट प्रयोग सम्बन्धी यस्तो अनुसन्धानले झन्डै १० प्रतिशत भन्दा बढी ‘इन्टरनेट एडिक्सन’को सिकार भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
सन १९९८ देखि मनोचिकित्सकहरूले इन्टरनेटले मानसिक अवस्थामा पार्ने असरबारे परिक्षण गर्न ‘इन्टरनेट एडिक्सन टेस्ट (आएटी) नामक सूत्रको प्रयोग थालेका हुन् । यो अध्ययनमा यो सूत्र सँगै युनिभर्सिटीको छुटटै परीक्षण विधि पनि प्रयोग गरिएको थियो । दुबै परीक्षणले उस्तै नतिजा देखाएको छ ।
प्रभावित विद्यार्थीहरूमा डिप्रेसन, एन्जाइटी, इनएटेन्सन, एक्जुकेटिभ फङ्सन जस्ता मानसिक समस्याहरूमा परेको देखिएको छ । २ सय ५४ विद्दयार्थीमा गरिएको परिक्षणमा ३३ जनामा यस्तो समस्या देखिएको हो ।
यस्ता हुन्छन् इन्टरनेट लतका लक्षण
१. पहिले इन्टरनेटमा चलाएको कुराहरू दिमाखमा खेलीरहने र फेरी इन्टनेटमा जोडिन छटपटी हुने
२. सनतुष्टी लिनका लागि इन्टरनेटको प्रयोग दिनदिनै बढ्दै जानु
३. इन्टरनेट प्रयोगको समय सीमित गर्न खोज्दा पनि नसक्नु, नियन्त्रण भन्दा बढि हुनु
४. इन्टरनेट प्रयोगकका कारण नै दैनिक काम, पढाई, पेसामा सम्बन्धहरू नै बिग्रिदै जाँनु
५. दैनिक जीवनका अरू समस्याबाट भाग्न इन्टरनेटको सहारा लिनु, निराश हुने, हिनता बोध भइरहने ।